Fitadiavam-bolan’ny besinimaro | NewsMada
Par Taratra sur 04/05/2018
Miditra tsikelikely, ao anatin’ny vanim-potoan’ny ririnina ny eto Madagasikara ankehitriny. Manomboka miha mangatsiaka araka izany ny andro. Tsy mba manangoly kosa nefa ny fiainan’ny firenena fa vao mainka aza, miha mafana vay sy miredareda. Hatreto, samy efa mahatsapa izay hafanana aterany izay, ny vahoaka rehetra noho ny tolona ataon’ireo solombavambahoaka ho an’ny fanovana.
Hafanana, miteraka fitadiavam-bola vaovao ho an’ny besinimaro anefa ity hetsika ity. Mifaly havanja ny ambanilanitra satria mitosaka ny vola. Tsy avy amin’ny banky iraisam-pirenena na avy amin’ny mpamatsy vola avy any ivelany, fa avy amin’ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana.
Mamafy vola etsy sy eroa, ny fitondrana mijoro ankehitriny, hamoana ny afo, etsy amin’ny kianja 13 mey. Tambatambazana, ny mpiasa-mpanjakana, tsy hanatevin-daharana eny. Omena famalifaliana ny eo anivon’ny minisitera, mba tsy hanara-dia, ireo mpitolona. Etsy an-kilany, misy koa ireo karamaina, mba hitokona. Samy fidiram-bola avokoa ireo saingy ny sandany, no tsy mitovy. Manararaotra izany ny olona satria izay vao tratra ry zareo, efa zatra nambotry sy nitavana fotsiny ary nitsentsitra ny hatsemboan’ny vahoaka.
Fetibe, mihitsy ity savorovoro eto amin’ny firenena ity. Mitosaka ho azy ny vola, tsy fanta-piaviana. Misy mihitsy ireo manao mpikaramanady politika, mba hahazoana vola. Misy ireo manao vazivazy, fa ity korontana eto amin’ny firenena ity, no fiveloman’izy ireo. Sady mamono no mamelona afo, amin’izay mahazo vola amin’ireo mpitari-tolona, no mitavana ny omen’ny mpitondra, miezaka handrava ny hetsika.
Ekena, fa raha tsy misy vola mihodina tsy mandeha ny tolona. Raha tsy mampiasa vola ihany koa ny mpitondra, ho main’ny afo, eo. Mahamay be, ny eto an-tanàna, nefa fidiram-bolan’ny besinimaro.